ကျောင်းများတွင် သင်ကြားမှုအရည်အသွေးကို မြှင့်တင်ရန် အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်သော Flat Panel ၏ အားသာချက်ခြောက်ချက်
Interactive Flat Panel သည် ကျောင်းများတွင် သင်ကြားမှုအရည်အသွေးကို မြှင့်တင်ရန် အပြန်အလှန်အကျိုးပြုသော Flat Panel ၏ အားသာချက်ခြောက်ခုသည် အနီအောက်ရောင်ခြည်ထိတွေ့မှုနည်းပညာ၊ အသိဉာဏ်ရှိသော ရုံးသင်ကြားရေးဆော့ဖ်ဝဲလ်၊ မာလ်တီမီဒီယာကွန်ရက်ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ၊ အဓိပ္ပါယ်မြင့်သော ပြားချပ်ချပ်ပြသမှုနည်းပညာနှင့် အခြားနည်းပညာများကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။
အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်သော Whiteboard နှင့် အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်သော Flat Panel
အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်စေသော Whiteboard နှင့် Interactive Flat Panel တိုးများလာသောကျောင်းများ၊ ကော်ပိုရေးရှင်းများနှင့် ပြပွဲခန်းမများသည် လူအများနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံရန်နှင့် တင်ဆက်မှုတိုးတက်စေရန်အတွက် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်သော whiteboard သို့မဟုတ် interactive flat panel ကို အဆင့်မြှင့်တင်ရန်နှင့် ခေတ်မီအောင်ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ဒါပေမယ့် ဒီနေရာမှာ မေးစရာတစ်ခုက ဘာလဲ...
ဒစ်ဂျစ်တယ် အဖြူရောင်ဘုတ်နှင့် စမတ်ဘုတ်
ဒစ်ဂျစ်တယ် Whiteboard & Smart Board သည် လက်ရှိတွင် ထိတွေ့မျက်နှာပြင်နည်းပညာများ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပြီး တိုးတက်ကောင်းမွန်လာမှုကြောင့် အဆင့်မြင့် ထိတွေ့ကိရိယာမျိုးစုံကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။Interactive Flat Panel သည် touch screen နှင့် computer all-in-one ၏ ပြီးပြည့်စုံသော ပေါင်းစပ်မှုဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် သံသယမရှိပါ...
အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသော led touch screen ၏အသုံးချပလီကေးရှင်းများ Interactive led touch screen များသည်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်သော whiteboards များ၊ video conferencing ၊ wireless presentation system ၊ computer စသည်တို့ကို ပေါင်းစပ်ရန်အတွက် ပေါင်းစပ်ထားသော ပူးပေါင်းဖြေရှင်းချက်များအား ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။ နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာသည် ပါဝင်သူများအား ar...
LED အပြန်အလှန်ထိတွေ့မျက်နှာပြင် လုပ်ဆောင်ချက် FAQ
LED အပြန်အလှန်ထိတွေ့မျက်နှာပြင်လုပ်ဆောင်မှု FAQ 1. ကွန်ဖရင့်တက်ဘလက်များသည် အဘယ်ကြောင့် ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင် မြူများပြသလေ့ရှိသနည်း။ဖန်သားပြင်၏ ဘေးကင်းမှုကို သေချာစေရန်၊ အကြမ်းခံထားသော မှန်အလွှာကို ဖန်သားပြင်သို့ ပေါင်းထည့်ကာ အပူကို ထိန်းသိမ်းရန် ၎င်းတို့ကြားတွင် ကွာဟချက်အချို့ ရှိနေသည်...
အစည်းအဝေးခန်းအရွယ်အစားအရ ကွန်ဖရင့်ကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ။
အစည်းအဝေးခန်းအရွယ်အစားအရ ကွန်ဖရင့်ကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ။မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း ခေတ်အမီဆုံး ကွန်ဖရင့်ရုံးမှ ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော အစည်းအဝေးတက်ဘလက်သည် ကုမ္ပဏီအစည်းအဝေး၊ ကွန်ဖရင့် panel ပရိုဂျက်တာ၊ အီလက်ထရွန်းနစ် whiteboard၊ ကြော်ငြာစက်၊ ကွန်ပျူတာ၊ တီဗီအသံစ...
ခေတ်မီ ကွန်ဖရင့်ခန်းများအတွက် မည်သည့် ကြီးမားသော မျက်နှာပြင်များ က ပိုကောင်းသနည်း။
ခေတ်မီ ကွန်ဖရင့်ခန်းများအတွက် မည်သည့် ကြီးမားသော မျက်နှာပြင်များ က ပိုကောင်းသနည်း။အစည်းအဝေးခန်းများ၏ အလှဆင်ခြင်းဒီဇိုင်းတွင် အစည်းအဝေးပြသမှု၊ ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်၊ ဝန်ထမ်းများလေ့ကျင့်ရေး၊ လုပ်ငန်းဧည့်ခံပွဲစသည်ဖြင့် မကြာခဏဆိုသလို ကြီးမားသော မျက်နှာပြင်ကို ပုံဖော်ထားသည်။ ၎င်းသည် အစည်းအဝေးရှိ အဓိကလင့်ခ်တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။
အပြန်အလှန်အကျိုးပြုသော စမတ်ဘုတ်စျေးကွက် ပြန်လည်ရယူရေးနှင့် အကျိုးသက်ရောက်မှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချက် အစီရင်ခံစာ
အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်သောစမတ်ဘုတ်စျေးကွက်ပြန်လည်ရယူခြင်းနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအစီရင်ခံစာအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်စမတ်ဘုတ်အဖွဲ့စျေးကွက်အစီရင်ခံစာသည်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်စမတ်ဘုတ်အဖွဲ့စက်မှုလုပ်ငန်း၏လက်ရှိနှင့်အနာဂတ်အလားအလာများ၏ပြည့်စုံသောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအပေါ်အလေးပေးထားသည်။ဤအစီရင်ခံစာသည် မူလတန်းနှင့် အလယ်တန်း သုတေသနပြုချက်တို့ကို ပေါင်းစပ်ပြီး မာ...
ဗီဒီယို ကွန်ဖရင့် နည်းပညာ တိုးတက်မှု
လက်ရှိအဆင့်မြင့်ဆုံး ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာအနေဖြင့်၊ မြင့်မားသော အဓိပ္ပါယ်ရှိသော ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်ကို အင်တာနက်အသုံးပြုရုံဖြင့် သိရှိနိုင်သည်။၎င်းသည် လုပ်ငန်းသုံး ခရီးသွားလာမှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို အစားထိုးခဲ့ပြီး သုံးစွဲသူများ၏ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးသည့် တယ်လီကွန်မြူနစ်နောက်ဆုံးပေါ် မော်ဒယ်ဖြစ်လာကာ ပြန်လည်...
စမတ်ကျသောသင်ကြားမှုများအတွက် မာလ်တီမီဒီယာအားလုံး-တစ်ထပ်တည်းသုံး PC သည် မည်မျှအစွမ်းထက်သနည်း။
သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူ၊ မာလ်တီမီဒီယာသည် ကွန်ပျူတာတစ်လုံးတည်းတွင် အားလုံးကို ပေါင်းစပ်ထားသည့် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းသစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအတွက် အပြန်အလှန်အကျိုးပြုသော သင်ကြားရေးပလက်ဖောင်းအသစ်ကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။EIBOARD မာလ်တီမီဒီယာ အားလုံးကို တစ်စုတစ်စည်းတည်း PC က သင့်အတန်းကို ပိုအဆင်ပြေစေတယ်။ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်၊ ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့် လည်ပတ်ရလွယ်ကူသည်...